सलाम व्यवसायी मल्होत्रालाई ! अब रु पाँचमै माक्स | CNNepal
सलाम व्यवसायी मल्होत्रालाई ! अब रु पाँचमै माक्स
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको त्रास बढिरहेको छ । बजारमा माक्स किन्न नपाएको गुनासो पनि ह्वात्तै चुलिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल चेम्बर अर्फ कर्मस र सरकारको सहयोगमा व्यवसायी दीपक मल्होत्राले सहुलियत दरमा मास्क उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका छन्। असहज परिस्थितीमा लुट मच्चाउने काला ब्यापारीहरुलाई सहुलियत दरमा मास्क उपलब्ध गराएर व्यवसायी दीपक मल्होत्राले सबक समेत प्रर्दशन गर्न लागेका हुन् ।
कोरोना भाइरसको सन्त्रास बढेसँगै बजारमा मास्क र स्यानिटाइजर अभाव देखिएको भन्दै चेम्बरको समेतको सहयोगमा व्यवसायी मल्होत्राले सहुलियत दरमा मास्क उपलब्ध गराउने भएका हुन्। चेम्बर र सरकारको सहयोगमा व्यवसायी मल्होत्राले सातामा ५ लाख मास्क उत्पादन गर्ने सक्ने क्षमताको मेसिन ल्याएर उत्पादन सुरु गर्न लागेका हुन् ।
केही दिनअघि मात्रै चेम्बरले मल्होत्राको संयोजकत्वमा कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न कमिटी समेत गठन गरेको थियो।
मल्होत्राका अनुसार मास्क उत्पादन गर्ने मेसिन दुई दिनभित्रै नेपाल आइपुग्नेछ। मेसिन र कच्चा पदार्थ भारतबाट नेपाल ल्याउने क्रम सुरु भइसकेको बताए । हामीले सबैभन्दा पहिले आवश्यक वस्तु मास्क र ह्यान्ड स्यानिटाइजर भएको निर्क्यौल गर्दै सहुलियत दरमा मास्क उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित यो कार्य अघि बढाईसकेका छौं उनले भने ।
बजारमा एउटा सामान्य मास्कको ५० रुपैयाँसम्म पर्न थालेकाले सहुलियत मूल्यमा मास्क उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित काम थालनी हुन लागेको उनको धारणा छ। मेसिन र कच्चा पदार्थ ल्याउँदै मास्क उत्पादन गरेर सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने सकिने थाहा पाएपछि यो काम अगाडि बढाउन लागेका छौं ,मल्होत्राले भने। त्यसका लागि आवश्यक मेसिनमा हामीले सरकारसँग केही छुट नलिने र कच्चा पदार्थ आयातमा भने भन्सार छुट लिने गरी काम अगाडि बढाउन लागेका उनले बताए ।
मल्होत्राका अनुसार मंगलबारसम्ममा मास्क उत्पादन गर्ने मेसिन नेपाल आइपुग्छ। कच्चा पदार्थ र मेसिन आइपुगेपछि सातामा पाँच लाख मास्क उत्पादन गर्दै सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको मल्होत्राले सुनाए ।
मेसिन नआउँदासम्मका लागि आइतबारैदेखि निम्बसको सहयोगमा मास्क उपलब्ध गराउन लागिएको समेत उनले बताए । चेम्बरले निम्बसबाट दैनिक १५ हजार मास्क लिएर बजारमा पठाउने भएको छ।
प्रति मास्क ६ देखि ७ रुपैयाँ लागत परेपनि उपभोक्तालाई सकेसम्म ५ रुपैयाँमा नै उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । साथै अति संबेदनशिल क्षेत्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन र प्रस्थान दुवै कक्षमा यात्रुलाई निशुल्क माक्स वितरण गरिने छ मल्होत्राले भने ।
Previous articleट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने १९४१ सवारी चालक कारवाहीमा
Next articleचन्द्रागिरि नगरपालिकामा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा सफलता